संसद विघटन हुने वित्तिकै किन सुटुक्क आयो चिनिया टोली नेपाल, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर के भने ? - नेपाली खोज
संसद विघटन हुने वित्तिकै किन सुटुक्क आयो चिनिया टोली नेपाल, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर के भने ?
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्रीसहितको टोली आइतबार (आज) नेपाल आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएका बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौको नेतृत्वको टोली काठमाण्डौ आएको हो ।
चिनियाँ टोलीको यो भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा कुनै पनि जानकारी गराएको छैन । यद्यपि उपमन्त्री गुओसहित चार जनाको टोलीले नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । हेर्नुहोस पुस १३ गतेका मुख्य समाचारहरु :
कोभिड–१९ का कारण देशभरका ४० प्रतिशत इँटा उद्योग बन्द
इन्टरनेटको त कुरै छाडौँ, फोन गर्नसमेत घाम पर्खनुपर्ने